मानसिक तनाव कम गर्ने उपाय - SangaloKhabar
सबै प्रकारका मानसिक रोगको औषधि हुन्छ
मुख्य कुरा कुनै पनि घटनालाई हामी कसरी हेर्छो भन्ने हो। मेरो आफ्नो क्षमता कति छ? कुनै पनि चिजलाई कसरी सम्हाल्नुहुन्छ? जब आफ्नो क्षमताले आफ्ना समस्यालाई समाधान गर्न सकिदैन तबसम्म तनाव भइरहन्छ।
मानसिक तनावका कारण मानिसलाई थुप्रै रोगहरू लाग्न सक्छ। डिप्रेसन, निराशापन, एन्जाइटिक डिसअर्डर, छटपटीको समस्या, त्यस्तै गरेर अनिन्द्राको समस्या हुन्छ। तनावमा मानिसहरूले रक्सी, गाजा, बिभिन्न खालका ट्याब्लेटसमेत प्रयोग गर्छन्। धेरै तनाव भयो भने कहिलेकाही रक्सी खानेले पनि धेरै खान्छ। जस्तै भूकम्पका कारणले आफ्नो घर भत्कियो। अब बनाउने उपाए छैन त्यसले गर्दा कतिपए मानिसलाई तनाव भइरहेको छ। त्यस्तै पागलपनको समस्या पनि तनावकै कारण हुन्छ। टाउको दुख्ने समस्या अर्को समस्या हो। अलिकति तनाव भयो टाउको दुखिहाल्ने समस्या पनि हुन्छ कतिपएलाई।
दिक्क लाग्ने नरमाइलो लाग्ने, निराश हुने , छटपटी हुने, अत्यास लाग्ने ढुकढुकी बढ्ने हुन्छ। कतिपए अवस्थामा मान्छेलाई मुटुकै समस्या भयोकि मलाई भन्ने पनि हुन्छ। डर लाग्ने, पेट पोलेको जस्तो हुने हुन्छ। कतिपएलाई ‘स्ट्रेस’ को कारणले ग्याष्ट्रिकको समस्यासमेत हुन्छ।
डा.प्रदीपराज पाण्डे- नसा तथा मानसिक रोग बिशेषज्ञ
यो रोगीको संख्या यतिनै छ भनेर भन्न त सकिदैन। तर, विश्वमा बीसदेखि पच्चीस प्रतिशतलाई कुनै न कुनै खालको मानसिक समस्या रहेको हुनसक्ने बिभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ। तर, नेपालमा यति नै छ भनेर कुनै पनि खालको डाटा अहिलेसम्म निस्किएको छैन र यसको अनुशन्धान पनि भएको छैन। तर, यी सबै समस्याका बिरामी बिशेषज्ञसँग सल्लाह लिन आइपुगेका हुदैनन्। नेपालमा जस्तै विश्वभर नै यसलाई लुकाउने चलन छ। जुन गलत हो। स्रोत- सेतोपाटी
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २३, २०७३ समय: १४:३६:४४